သင်၏ terminal ကို Android Device Manager ဖြင့်ကာကွယ်ပါ Androidsis
သင့်ဖုန်းကိုသော့ခတ်ပြီးဖျက်ပစ်ရန် Android Device Manager ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်
Manuel Ramirez | | လုံခွုံရေး, လဲ tutorial
Google ကဖြစ်နိုင်ချေရှိသည် ဒေတာအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ဖျက်နိုင်ကြောင်း သင့်ဖုန်း၏လွယ်ကူ။ ထိရောက်သောနည်းဖြင့်အသုံးပြုခြင်း Android Device Manager ဟုခေါ်သည့်ဝန်ဆောင်မှုသစ်သင်၏ဒေတာများကိုသင်၏ဖုန်းများ၊ တက်ဘလက်များဖြင့်အဝေးမှသေသေချာချာဖျက်ပစ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ယနေ့ Google သည်ထည့်သွင်းရန် Manager ကို update လုပ်သည် မျက်နှာပြင်သော့ခတ် PIN ကိုဖန်တီးခြင်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲခြင်းကဲ့သို့သောရွေးစရာများterminal ဒေတာအားလုံးကိုအဝေးမှဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေးကြီးသော option တစ်ခုကိုထည့်သွင်းခြင်း။
Android Device Manager ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းပြပါမယ် အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများအတွက်ဒါကြောင့်အလွန်လွယ်ကူသည်။
Android Device Manager ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ
ပထမဆုံးသွားပါ google.com/android/devicemanager en သင့်လက်ပ်တော့ပ် ဦး ကွန်ပျူတာ
Android Device Manager ကိုခွင့်ပြုပါ တည်နေရာဒေတာကိုသုံးပါ အောက်ပါပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း -
သင်၏ဂူဂဲလ်အကောင့်နှင့်သင်ချိတ်ဆက်ထားသောကိရိယာများ၏စာရင်းကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ ရွေးချယ်ထားသည့်ကိရိယာပေါ်တွင်တစ်ချိန်ကသင်လုပ်နိုင်သည် အသိပေးချက်တစ်ခုပေးပို့ပါ သင်ဝေးလံခေါင်ဖျားစကားဝှက်ကိုသက်ဝင်စေပြီးအချက်အလက်များကိုသုတ်ပစ်လိုသည့်ကိရိယာသို့။
သင်၏ terminal တွင်အသိပေးချက်ကိုသင်ရရှိသောအခါသင်သတိပေးချက်ကို နှိပ်၍ သင်ကမေးမြန်းလိမ့်မည် သငျသညျကိုသက်ဝင်ချင်လျှင် ကိရိယာမန်နေဂျာ။ အောက်ပါပုံတွင်ပြပါ -
၎င်းကိုဖွင့်ပါ။ "ဒီစက်ကိုအဝေးမှတည်နေရာ" နှင့် "ဝေးလံခေါင်သီသော့ခတ်ခြင်းနှင့်စက်ရုံအချက်အလက်များပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း" ကိုရွေးပါ။ ပထမတစ်ခုကိုပုံမှန်အားဖြင့် activate လုပ်ပြီးနောက် option ကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီ option ကိုအသုံးပြုရန်သင့်တော်သောခွင့်ပြုချက်ပေးပါ အဝေးမှသင်၏ terminal ကိုစီမံခန့်ခွဲ.
ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုကိုသက်ဝင်စေခဲ့သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးသို့ပြန်သွား ဝက်ဘ်ပေါ်ရှိ Android စက်များနှင့်စာမျက်နှာကိုအသစ်ဖွင့်ပါ
ယခု Terminal ကိုမြည်ရန်တနေရာ၏ဘေးတွင်မီးမောင်းထိုးပြထားသောရွေးစရာနှစ်ခုကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် "Block" နှင့် "Delete" သင်၏ terminal ကိုအဝေးမှပိတ်ဆို့ပြီးဖုန်းမှဒေတာအားလုံးကိုပင်ဖျက်ပစ်ရန်သင့်စက်တွင်အဆင်သင့်ရှိသည်
Terminal lock ကိုအဝေးမှရွေးလိုက်ရင် window တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ် သင်တစ် ဦး PIN သို့မဟုတ် password ကိုသက်ဝင်ခွင့်ပြုသည် သင့်ဖုန်းတွင်ယခင်ကသင့်စက်၌မရှိသည့်တိုင်သင်၏ဖုန်းပေါ်တွင်။ သင်ဤလုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည့်အချိန်၊ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း၊ သင်၏ terminal သည်မျက်နှာပြင်ကိုပိတ်လိမ့်မည်။ သင်ဖွင့်လိုသောအခါ၎င်းသည်သင်ယခင်ကဖန်တီးခဲ့သော PIN နံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ရန်သင့်အားတောင်းဆိုလိမ့်မည်။
သင်၏ terminal ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်အခိုးခံရလျှင်၊ သင်ပထမဆုံးပြုလုပ်သင့်သည်မှာ၎င်းကို block လုပ်ပြီး Android Device Manager တွင်သင် activate လုပ်ထားသောအခြား option ကို အသုံးပြု၍ data အားလုံးကိုဖျက်ပစ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချက်အလက်အားလုံးကိုသုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်လိုက်သည့်အခါ၎င်းစက်သည်အလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်လိမ့်မည် Internal Storage နှင့် SD Card မှအချက်အလက်များ။ သုတ်လိမ်းပြီးသည်နှင့်သင် terminal ထဲရှိသင်၏ဒေတာအားလုံးကိုမည်သည့်နေရာနှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်ဖျက်ပစ်သည်ကိုဖော်ပြသည့်အသိပေးချက်အီးမေးလ်ကိုသင်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Un ဂူဂဲလ်မှကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ကြီးမြတ်ဝန်ဆောင်မှု ဒီ Device Manager ကိုလွယ်လွယ်ကူကူလုပ်နိုင်တဲ့အတွက် Terminal ကိုပိုပြီးလုံခြုံအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - Android Device Manager မှစွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ
ရင်းမြစ် - အန်းဒရွိုက်ဗဟို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » လုံခွုံရေး » သင့်ဖုန်းကိုသော့ခတ်ပြီးဖျက်ပစ်ရန် Android Device Manager ကိုမည်သို့ configure လုပ်ရမည်
မင်္ဂလာပါ။ သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တကယ်ကိုအရမ်းစိတ်ဝင်စားပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - ကျွန်ုပ်လိုချင်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်၏အကောင့်မှ terminal ကိုပယ်ဖျက်လိုလျှင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ သူတို့ကချို့ယွင်းချက်ရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုဖုန်းအသစ်တစ်ခုနဲ့လဲလှယ်လိုက်ကြပြီးအခုနှစ်ခုလုံးပေါ်လာတယ်။ မင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ငါထင်တယ် Google သည်သင်သတ်မှတ်ထားသော terminal ကိုအသုံးမပြုသည်က၎င်းကိုစာရင်းမှဖယ်ထုတ်သည်။ ငါပြောတာကငါ့မှာ Android အဟောင်းကိုရံဖန်ရံခါငါသုံးခဲ့တဲ့ဒီစာရင်းထဲမှာမပေါ်လာလို့ပါ။
Xrnx Sxe ဟုသူကပြောသည်
သင်ခန်းစာအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်မှာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်၏စက်ကိုပိတ်ဆို့ရန် gps နှင့်အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်ပါသလား။ ဒါမှမဟုတ်ဂူဂဲလ်အကောင့်နဲ့ pc ကနေငါသည်မိုဘိုင်းကိုမအတည်ပြုဘဲအရာအားလုံးကိုလုပ်သလား။ စိတ်မရှိပါနဲ့ငါ android အတွက်လေ့လာသူပါ။
Xrnx Sxe အားပြန်ပြောပါ
အကယ်၍ သင်၏အင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိုမဖွင့်ပါက၎င်းကိုပြုလုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက် terminal ကိုပိတ်ထားလိမ့်မည်။ ၎င်းကိုသင်ပိတ်ဆို့ရန်ကွန်ယက်လိုအပ်သည်။ GPS နှင့် ပတ်သက်၍၊ အကယ်၍ သင်သည် Wi-Fi သို့မဟုတ်ဒေတာကွန်ယက်မှတဆင့်ဆက်သွယ်ပါက Android သည်သင်၏ကိရိယာ၏တည်နေရာကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် GPS နှင့်ပိုမိုတိကျစေရန်သင်၏ Wifi (သို့) 3G ချိတ်ဆက်ထားကြောင်းအမြဲတမ်းအကြံပြုပါသည်။
၎င်းကိုပထမဆုံးအကြိမ် configure လုပ်ခြင်းသည်၎င်းသည်သင်၏သူဖြစ်ကြောင်းသင်၏မိုဘိုင်းမှအတည်ပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သို့မှသာလျှင်သင်မဖြစ်နိုင်ပါ။
xRenex Sxe ဟုသူကပြောသည်
အဖြေအတွက် Manuel ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် post post ကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သသလိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
xRenex Sxe အားပြန်ပြောပါ
မျက်နှာပြင်သော့ဖွင့်ကုဒ်ကိုဖွင့်သည်နှင့်တပြိုင်နက်၎င်းကိုပိတ်ထားနိုင်ပါသလား။ ၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော option တစ်ခုဖြစ်ပုံရသည်။ သို့သော်၎င်းကို Device Manager မှသာသက်ဝင်မှသာပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုငါအမြဲရ ;-(
Rodrigo, တဖန် ဟုသူကပြောသည်
PIN ကိုမရရှိပြီဆိုတာကိုသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါဆိုရင် Security / Screen Lock ကိုသွားပြီး“ none” ကို option အသစ်တစ်ခု (ဒါမှမဟုတ်ငါလုပ်ခဲ့သလိုမျိုး Slide) ကိုရွေးရမယ်။
နောက်တဖန် Rodrigo ပြန်ပြောပါ
ဒီ PIN နံပါတ်သည် Terminal ပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ခိုးယူခံရသည့်အခြေအနေများအတွက်ဖြစ်သည်
မေးခွန်းတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ဖုန်းပျောက်ဆုံးသွားပြီး google device manager သုံး၍ သော့ခတ်လိုက်သည်။ ငါကနောက်မှတွေ့ပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့သော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်?
Fifa 14 ယခုဒေါင်းလုပ် / ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်
Samsung Galaxy S, Rom Joyos Android 2.3.7 အိုင်ဖုန်းနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည့် FM ရေဒီယိုအက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်